Handan Yongnian Zhanyu Fidiyaha Manufacturing Co., Ltd. waa go'an naqshadeynta qoto-qaybinta, horumarinta madax-bannaan ee caaryada, wax soo saarka, iibka, adeegga mid ka mid ah warshadda wax soo saarka.
Handan Yongnian Zhanyu Fidiyaha Manufacturing Co., Ltd. waa go'an naqshadeynta qoto-qaybinta, horumarinta madax-bannaan ee caaryada, wax soo saarka, iibka, adeegga mid ka mid ah warshadda wax soo saarka. Shirkaddu waxay leedahay koox hawleed u gaar ah, waxay si madax-bannaan u qaadi kartaa noocyo waaweyn oo yar iyo weyn ...
Bishii Janaayo 5, 2021, Tiyaatarka Weyn ee Degmada Yongnian waxaa lagu qabtay Shirka Shaqada Dhaqaalaha Degmada Yongnian ee 2020 iyo ganacsatada amaahda gaarka loo leeyahay shir lagu amaanayo.
Bishii Janaayo 5, 2021, Tiyaatarka Weyn ee Degmada Yongnian waxaa lagu qabtay Shirka Shaqada Dhaqaalaha Degmada Yongnian ee 2020 iyo ganacsatada amaahda gaarka loo leeyahay shir lagu amaanayo. Cui Yafeng, oo ah guddoomiyaha shirkadda Zhanyu, ayaa ku guuleystay cinwaanka ganacsade heer sare ah oo ka tirsan Yongn ...
On December 10, 2020, waxaan si diirran ugu dabaaldegnaa wareejinta xarunta hawlgalka ee shirkadda Zhanyu iyo dhammaystirka iyo isticmaalka bakhaar dhan 7000 mitir murabac ah.
On December 10, 2020, waxaan si diirran ugu dabaaldegnaa wareejinta xarunta hawlgalka ee shirkadda Zhanyu iyo dhammaystirka iyo isticmaalka bakhaar dhan 7000 mitir murabac ah. Sanadihii la soo dhaafay, shirkadda Zhanyu waxay u hoggaansameysay himilada ah inay gaarto macaamiisha iyo shaqaalaha, waxayna u hoggaansameysaa ...